Dadweyne Aad U Tiro Badan Oo Maanta Socod Ku Maray Goobihii Dagaaladu ka dhaceen
"DAGAAL SOKEEYE DOONIMAYNO, DHIIG DAATA DOONI MAYNO, WALAALO ISDOOXA DOONIMAYNO" Shacabka Muqdisho
Mac-Hadka� ASAL ee Barashada Computerka iyo Xisaabaadka Ganacsiga:
SomaliTalk | Muqdisho, Soomaaliya
Dad aad u fara badan oo isugu jira caruur , dumar iyo odayaal waayeel ah ayaa maanta socod dheer ku maray goobihii ay labada maalmood dagaaladu ka socdeen ee Isgoyska Fagax iyo Siisii ee magaalada Muqdisho, dadkan mudaharadayay ayaa ku dhawaqayay ereyo ay ka mid ahaayeen: DAGAAL SOKEEYE DOONIMAYNO, DHIIG DAATA DOONI MAYNO, WALAALO ISDOOXA DOONIMAYNO iyo ereyo kale oo dhamaantood muujinaya sida ay uga soo horjeedaan in halkaas ay ka dhacaan dagaalo kale. [Dadka iyo Dagaal Oogayaasha Kuweebaa Gardaran?]
Dadka banaabaxayay waxaa la hadlay Dr. Xuseen Xaaji Bood oo ahaa ninka sida weyn ugu ololaynayay joojinta dagaaladan dhacayay isla markaana fidiyay gogosha lagu wada hadlayay. Md. Bood wuxuu halkaa ka jeediyay khudbad dheer oo uu uga hadlay, heshiiskan la gaaray iyo waliba dhibaatada ay leeyihiin dagaalada sokeeye oo uu sheegay inay aafeeyeen dalka gaar ahaan magaalada Muqdisho.
Waxaa la arkayay gawaarida loo yaqaan Tiknikada oo sita calamo cad cad oo dhex maraya fariisimadii ay isku horfadhiyeen labadii malayshiyo ee dagaalamaysay, gawaaridan Tikmikada ah oo ay iska leeyihiin beelo ka madax banaan qolyaha is haya, ayaa halkaas loo geeyay inay ilaaliyaan xabad joojinta la gaaray.
Shir Deg-Deg ah oo ey yeesheen Odayaasha, Aqoon yahanada, iyo dhalinyarada Bahweynta Mudulood ee ku sugan Waddanka Ingiriiska U.K. maanta oo taariikhdu tahay 05/09/02 GUJI..
Xalay iyo shalay oo ay si weyn ugu hawlanaayeen waxgaradka Muqdisho oo dhan sidii ay u joojin lahaayeen dagaalkaas ayey goor danbe oo xalay ahayd u suurtowday inay isa soo horfariistaan dhinacyadii sida tooska ahayd colaadu u dhex martay.
Qaybihii dagaalamayay ayaa ku heshiiyay qodobo doora oo ay ka midyihiin in marka hore xabadda la joojiyo marka labaadna lakala qaado ciidamada is horfadhiya, ugu danbayntiina loo gudbo sidii loo lafa guri lahaa wixii sababay in xabad la isla dhaco, qodobadaas oo ay dhamaan labadii qayboodba ku qanceen.
Xafiiska Qaraamada u qaabilsan Soomaaliya ayaa maanta (sept 6) soo saaray warsaxaafadeed uu ku muujiyey walaaca weyn ee ay ka qabaan xaaladda Soomaaliya. Gaar ahaan warsaxaafadeedku waxa uu xusay sida uu ergeyga gaarka ah ee Kofi Annan u qaabisaln Soomaaliya oo magaciisa layiraahdo Mr Winston Tubman uu uga walaalcsanyahay xaalada Soomaaliya GUJI..(english)
Dadka reer Muqdisho ayaa si guud ugu farxay dhamaynta colaaddii taagnayd, gaar ahaanna kuwii ka qaxay deeganadoodii maalmihii colaada. waxaa hadda bilawday isu socodkii dadka iyo waliba baabuurta, waxaa guryahoodii ku soo laabanaya dadkii halkaas hore uga qaxay, ka dib markii ay maqleen heshiiskan la gaaray.
Darawal waday gaari booyad ah oo maanta lagu dilay Isgoyka Tawfiiq ee Magaalada Muqdisho.
Nin lagu magacaabo Madaxeey oo ahaa darawal waday gaari weyn oo boyada ayaa maanta dablay hubaysan ku dileen Isgoyska Tawfiiq, isaga oo wata baabuurkiisa. Dablaydan oo aan la garanayn sababta ay u dileen ninkaas ayaa waxaa halkaa ka qaaday maydkiisa markii danbe dumar ku sugnaa isla goobtaas.
Dablaydan oo aan qaadan baaburkii booyadda ahaa, ayaa ugu danbaytii baxsaday. Halka shilkaasi ka dhacay waxaa ka agdhoweyd maxkamadda Islaamiga ah ee Tawfiiq, mana jiraan ilaa iyo hadda cid timid goobtii shilkaasi ka dhacay.
SOMALITALK.COM | Sept 6, 2002
WARARKII HORE EE MOGADISHU WEEKLY REPORTER - GUJI
Warbixin: Dagaalkii is-Goyska Fagax
Dagaalkan oo kadhacay isgoyska fagax ee Muqdisho, Cusman Caato oo ka hadlay dembiilayaasha dagaalka iyo wadahadallo u socda garab RRA ah iyo is-bahaysiga dooxada Jubba GUJI.. 4/9
GARGAAR DEG-DEG AH
Baaq Kasoo Baxay Beesha Saransoor�